Next Casino eku inthanethi - R 3,000 Ibhonasi Lokwamukela + 100 Wama Spins
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-next casino
Isibuyekezo se-Next Casino
Isofthiwe:Betsoft, Microgaming, NetEnt, Play n GO, Quickspin
Ibhonasi Lokukwamukela:150% Ize ifike R3,000 ne 100 ama-spins
R100 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
I-Next Casino yi-casino e-intanethi ethandwa kakhulu ethokozelwa yizinkulungwane ngezinkulungwane zabadlali emhlabeni jikelele. Yethulwe ngo-2013 futhi iqhutshwa yi-Aspire Global International, le khasino yaba yimpumelelo esheshayo ngokunikela ngemidlalo emikhulu namabhonasi amakhulu kepha futhi nokwenyusa okusha nokusekelwa kwamakhasimende okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, i-NextCasino yamukela izinhlobo ezahlukahlukene zezimali esizeni okubandakanya i-Euro, iSterling, kanti futhi ungakhohlwa neRandi!
Sekwande kakhulu ezikhathini zakamuva ukuthi abadlali baseNingizimu Afrika manje bathutheleka ngobuningi kule ndawo njengoba benza i-NextCasino ikhasino yabo yokuqala ukuvakashela. Qhubeka ufunde njengoba sibheka ngokujulile le khasino enezinto eziningi ukuze uthole ukuthi udumo lwayo lisho ukuthini.
Amakhodi Ebhonasi Yokwamukela e-NextCasino
Ukubhalisela ikhasino eku-inthanethi imvamisa kumayelana nokuthi yimaphi amabhonasi anenzuzo ozowathola ngokwenza lokho. Yebo, ukunikezwa kweBhonasi Yokwamukelwa e-Next Casino nakanjani kufanele ukubhalisele ngoba ngeke uthole ibhonasi eyodwa kuphela kodwa amabhonasi amakhulu kanye nama-spins ayi-100 ngaphezulu kwalokho!
Ibhonasi Yediphizithi Yokuqala
Uma usuyenzile i-akhawunti bese wenza idiphozi yokuqala ka-R350 noma ngaphezulu lapho uzothola ibhonasi enhle kakhulu engu-100% eyamukelwa efinyelela ku-R, 3000! Njengebhonasi engeziwe, uzophinda uthole ama-100 Spins ku-NetEnt slot Twin Spin yakudala. Sikhuthaza abadlali ukuthi basebenzise ama-spins ngokushesha nje lapho ubathola njengoba bephelelwa yisikhathi ngemuva kwamahora angu-24 nje engezwe ku-akhawunti yakho.
Ibhonasi Yosuku lwesibili
Ngokushesha nje lapho ubhalisile futhi wa diphozitha imali, i-NextCasino izokujabulela ukukunikeza ibhonasi engu-50% yokulayisha kabusha kuze kufike ku-R750. Le bhonasi ekhethekile inikezwa ngosuku olulandelayo ngemuva kokwenza idiphozi yokuqala.
AMANYE AMAPROMOSHINI AKHETHEKILE OWANIKEZWA YI-NEXTCASINO
Ukugcina abadlali benentshisekelo, i-NextCasino isebenzisa ukukhushulwa okumnandi njalo ngenyanga. Lawa ma-promos kumnandi ngokwedlulele ukubamba iqhaza ngamabhonasi amaningi futhi aphendulela ukubanjwa. I-NextCasino ibuye iqhube imiqhudelwano ekhethekile ngezikhathi ezithile enikeza abadlali ithuba lokuwina isabelo samachibi amakhulu omklomelo wemali. Qiniseka ukuthi ubabhekile ngesikhathi esizayo lapho uvakashela isayithi labo.
Noma kunini lapho ubeka khona ababheji bemali bangempela kusayithi lapho-ke uzothola amaphuzu emiklomelo. La maphuzu afaka isandla esimeni sakho se-VIP kuhlelo lwe-VIP lwe-NextCasino olwesabekayo. Njengoba ukhuphuka futhi uthuthukisa isimo sakho se-VIP lapho-ke uzoqala ukuvula amanye amabhonasi nezinzuzo ezitholakala kuphela kubadlali be-VIP. Imivuzo ye-VIP lapha ifaka imenenja ye-akhawunti yakho siqu, ukudlala mahhala ngamaSonto, amabhonasi athuthukisiwe, imikhawulo yediphozithi ephakeme, kanye namabhonasi okugubha usuku lwakho lokuzalwa!
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-Next Casino kuselula naku-Desktop
Uma usuvele unayo i-akhawunti elandelayo ye-Casino ukungena ngemvume kulula kakhulu njengoba konke okumele ukwenze chofoza inkinobho ethi ‘LOGIN’ bese ufaka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Uma usungene ngemvume, ungabheka imininingwane ye-akhawunti yakho ukubona ibhalansi yakho kanye nokufaka noma ukukhipha imali bese usetha imikhawulo uma ufisa ukwenza kanjalo.
Uma umusha kusayithi futhi ungakayenzi i-akhawunti, masibonge ukuthi inqubo yokubhalisa iyinqubo ilula futhi ayihluphekisi izothatha imizuzu embalwa yesikhathi sakho ukuyiphothula. Ukuze ubhalise, konke okumele ukwenze ukulandela lezi zinyathelo:
1. Vakashela i- Next Casino.
2. Chofoza inkinobho Joyina.
3. Faka yonke imininingwane yakho njengegama lakho, ikheli le-imeyili, usuku lokuzalwa, inombolo yeselula nekheli.
4. Vumelana nemigomo nemibandela yekhasino bese uchofoza ukuthumela.
5. Chofoza inkinobho ethi ‘Vula i-Akhawunti’ futhi yilokho kuphela.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala E-Nextcasino
Ukuhlukahluka Okukhulu Kwe-Slots
I-NextCasino ifaka umtapo wolwazi wemidlalo ogcwele kahle ogcwele ikhulu ezindawo zokuzijabulisa eziku-inthanethi. Uzothola konke ukukhishwa okusha okushisayo kulapha kanye nezikhala zakudala ezithandwa yibo bonke abadlali futhi impela inqwaba yezikhala ze-jackpot ezinikeza imiklomelo yemali yokunisela umlomo. Abahlinzeki be-software abadumile njenge-Big Time Gaming, i-NextGen Gaming, i-Play’n GO, i-NetEnt, ne-Microgaming amandla emidlalo esizeni ukuqinisekisa ukuthi abadlali baneziqu eziningi ezisezingeni eliphezulu abangakhetha kuzo uma bevakashela i-NextCasino. Izikhala njengamanje ezijatshulelwa ngabadlali be-NextCasino zifaka phakathi i-Starburst, Book of Dead, Wolf Gold, Fruity Friends, neFire Joker.
Imidlalo Ebukhoma ye-Casino
Ukuheha abadlali abakhetha indlela ejwayelekile, i-NextCasino ifaka ubukhazikhazi be-Live Casino esizeni. Lapha, abadlali bangakhetha ebangeni elingaphezu kwama-20 + imidlalo yomthengisi bukhoma ngokuhlukahluka kwe-Blackjack, i-Roulette, ne-Baccarat etholakalayo. Le midlalo isakazwa bukhoma ivela endaweni eyiqiniso yekhasino futhi isingathwa yisigejane esinobungane sabathengisi ababukhoma abamomothekayo. Intandokazi yethu esizoyidlala lapha yiRoulette ebukhoma ethokozisayo njalo.
Abadlali abangafuniukuphotha ama-reels sonke isikhathi lapho sincoma ukuthi uhlole isigaba se-Scratch Cards esizinikezele kwa-NextCasino. Kunemidlalo engaphezu kwengu-25 + ongayijabulela lapha njengoba uklwebha amaphaneli ukuze uveze imiklomelo yemali eyimfihlakalo. I-NextCasino futhi ifaka uhla oluncane kepha olunentshisekelo lwemidlalo yetafula futhi kufaka phakathi izihloko zakudala ezinjengeJacks noma i-Better neSolitaire.
Ikhasino Yeselula ye- NextCasino: Qhathanisa kanjani I-Next Casino kuselula
I-Next Casino iyahambisana namadivayisi akamuva eselula namathebulethi njengoba ifaka isayithi leselula eliphendulayo eliphendulwa ngokuphelele. Ilula ukuyisebenzisa, ilayisha ngokukhulu ukushesha, futhi ngenxa yokufinyeleleka kakhulu kusakhiwo esihlakaniphe kakhulu.
Isayithi leselula ngokwalo linamakhulu ama-slots amangalisayo nemidlalo yekhasino ongakhetha kuyo ngomdlalo ngamunye injabulo yangempela ongayithola njengoba uqala ukusebenzisa isikrini esithintwayo kunokuba ucindezelwe yigundane lekhibhodi elixakile lapha.
Nginga yidawuniloda i-Next Casino efonini yami?
Akunasidingo sokulanda noma yini efonini yakho ukuze ufinyelele ku-NextCasino ngoba iyikhasino elidlala ngokushesha. Lokhu ngokuyisisekelo kusho ukuthi isiza asidingi noma iyiphi isoftware eyengeziwe yokwenza imidlalo efonini yakho, konke okudingekayo ekugcineni kwakho yisiphequluli sewebhu.
Izindlela Zokukhipha Imali Ezamukelwe Next Casino
Visa/MasterCard Yebo Izinsuku ezingu-4-6
Bank Transfer Yebo Izinsuku ezingu-4-6
Klarna Yebo N/A
Trustly Yebo 3
Skrill Yebo 3
Skrill 1-Tap Yebo 3
Neteller Yebo 3
EcoPayz Yebo 3
PayPal Yebo 3
Rapid Transfer Yebo 6-8
GiroPay Yebo N/A
Interac e-Transfer Yebo
EasyEFT Yebo N/A
MuchBetter Yebo Ngokusheshayo
Euteller Yebo N/A
Zimpler Yebo N/A
EPS Yebo N/A
Paysafecard Yebo N/A
InstaDebit Yebo N/A
Izindlela Zoku Diphizitha Ezamukelwe e-NextCasino
Skrill 1-Tap Yebo
AstroPay Card Yebo
Kusungulwe: 2013 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Opherethwa ngu: Aspire Global International Email: [email protected]
Ilayisensi: I-Malta Gaming Authority, iKhomishini Yezokugembula yase-UK Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Inguqulo Yokulanda: Cha 24/7 365 ukwesekwa: Cha
Izinzuzo Nezindleko ze-Next Casino
Uma ufuna isipiliyoni sekhasino esiku-inthanethi njenganoma iyiphi enye i-NextCasino okufanele uyivakashele. Isayithi ngokwalo lenzelwe ngokumangalisayo futhi kulula kakhulu ukuzulazula ikakhulukazi kumaselula. Ukukhethwa kwemidlalo esezingeni eliphakeme okunikezwayo lapha kuyamangalisa ngempela futhi ukunikezwa kwebhonasi eyamukelekile kungenye yezinto ezinhle kakhulu esake sazithola. Sithande ikakhulukazi uhla olubanzi lwezinketho zokukhokha ezitholakalela abadlali futhi kuhle ukubona ukuthi akwamukelwa nje iRandi kepha nokuthi ungasebenzisa i-EasyEFT ukufaka nokukhipha imali futhi.
Uma kukhulunywa ngobubi, akukho okuningi okuzoshiwo lapha ngaphandle kokuthi ukwesekwa kungabi ngu-24/7 nokuthi akunikezwa ngesiBhunu. Kodwa-ke, sinesiqiniseko sokuthi njengoba isikhathi sihamba iqembu lase-NextCasino lizobheka ukulungisa lokhu njengoba isiza liya ngokuya lithandwa kakhulu ngabadlali baseNingizimu Afrika.
Yini Eyenza I-Nextcasino Ukhetho Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Nazi izinto ezimbalwa ezibalulekile zokuthi kungani i-NextCasino isibe nomthelela omkhulu kubadlali baseNingizimu Afrika njengamanje:
•Ibhonasi eyamukelekile ehlinzekwayo
• yekhasino yokudlala esheshayo
• Yamukela iRandi laseNingizimu Afrika
• Ukunikezwa okukhethekile nemivuzo yabadlali be-VIP
• Ukukhetha okuhle kwemidlalo
• Insizakalo yamakhasimende emnandi
• Uhla Superb ongakhetha yasebhange
• Ukusebenziseka kalula
Izikhalazo ze-Nextcasino yase Ningizimu Afrika
• Izikhathi zokuhoxa zinde impela ukudluliswa kwamabhange
• Ukuseko lwe 24/7 alukho
• I-Cryptocurrency ayisekelwe
Ngabe i-NextCasino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Yebo, abadlali baseNingizimu Afrika bakhululekile ukujoyina i-NextCasino njengoba isayithi linamalayisense ngokugcwele futhi lihambisana nemithetho yakamuva yokugembula eku-inthanethi.
Ngiyikhipha kanjani imali kwa-NextCasino?
Ukukhipha imali yakho, konke okumele ukwenze chofoza inkinobho ye-CASHOUT etholakala kuthebhu ye-Balance ye-akhawunti yakho. Ungakhipha imali yekhasino ngezindlela ezahlukahlukene kwa-NextCasino ngokusebenzisa izinketho zokukhokha ezinjengokudluliswa kwebhange nama-e-wallet.
I-NextCasino iyikhasino ethandwa kakhulu kwi-inthanethi eyaqala ukwethulwa ngonyaka we-2013. Yamukela abadlali abavela emazweni omhlaba wonke, kufaka phakathi iNingizimu Afrika, futhi ilayisensi yiKhomishini Yezokugembula yase-UK kanye neMalta Gaming Authority.
Ngubani ophethe i-NextCasino?
Kungumkhiqizo ophethwe yiMinotauro Media futhi uqhutshwa ngumhlinzeki wesoftware ohola phambili u-Aspire Global International.
Impendulo ngeshwa ayikho njengoba ukugxila okuyinhloko kwe-NextCasino kunikela ngemidlalo emihle yekhasino kubadlali.